यी ५ तरिका अपनाएर सजिलै गर्न सकिन्छ इम्यूनिटी बूस्ट
शरीरलाई स्वस्थ्त तथा स्फुर्त राख्न इम्यूनिटी पावर बलियो हुनुपर्छ । इम्यूनिटी बढाउनका लागि डाइट तथा जीवनशैली दुवै सही हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यहाँ इम्यूनिटी बूस्ट गर्ने ८ तरिकाबारे चर्चा गरिएको छ ।
१. निन्द्रा पूरा लिनुहोस्
निन्द्रा र इम्यूनिटीबीच निकै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । पर्याप्त निन्द्रा नलिने मानिस धेरै बिरामी भइरहने सम्भावना हुन्छ । अध्ययनका अनुसार, मानिस ६ घन्टाभन्दा कम निन्द्रा लिन्छ भने उसलाई चिसो, रुघाखोकी लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसकारण स्वस्थ रहनका लागि कम्तिमा पनि ८ घन्टा पर्याप्त निन्द्रा लिनुपर्छ । पर्याप्त निन्द्रा लिँदा प्राकृतिक तरिकाबाट इम्यून बूस्ट हुन्छ ।
२. प्लान्ट फूड धेरै खाने
फल, सागपात, मेवा अथवा फलेका फलफूलहरू, हरियो तरकारीहरूमा पोषक तत्व र एन्टीअक्सिडेन्टको मात्र भरपूर हुन्छ । यसले शरीरमा फ्री रेडिकल्ससँग लड्छ र कोशिकाहरूलाई सुरक्षित राख्दछ । यस्तो खानेकुरामा पाइने फाइबरले पेटमा राम्रो ब्याक्टेरियालाई बढाउँछ । यसले इम्यूनिटी बढ्छ भने हानिकारक जीवाणु पाचन प्रणालीको माध्यम हुँदै शरीरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन ।
३. सुगर नियन्त्रण गर्नुहोस्
अध्ययनका अनुसार, सुगर तथा रिफाइन्ड काब्र्सले मोटोपन बढाउँछ । मोटोपनले शरीरमा विभिन्न रोग निम्त्याउँछ । मोटोपन बढ्दै जाँदा मुटु रोग र मधुमेहको सम्भावना बढी हुन्छ । यसले इम्यूनिटी कमजोर बनाउँछ पनि । सुगर नियन्त्रण गर्ने हो भने शरीरको तौल पनि नियन्त्रणमा आउँछ भने इम्यूनिटी पनि बढ्न थाल्छ ।
४. सही मात्रामा पानी पिउनुहोस्
शरीरलाई पूरै स्वस्थ राख्नका लागि पानीको मात्रा सही हुनुपर्छ । पानीको कमीका कारण पाचन प्रणाली, किड्नी लगायतको कार्यक्षमतामा समेत असर पर्छ । यसको कारण मानिस बिरामी पर्न जान्छ । यसबाट बच्नका लागि पानी सही मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । बजारमा पाइने विभिन्न प्रकृतिका जुसहरू पिउनु पनि हानिकारक हुन्छ । त्यसकारण धेरै मात्रामा पानी पिउनुहोस् ।
५. एक्सरसाइज गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो इम्यूनिटीलाई बूस्ट गर्नका लागि शरीरलाई एक्सरसाइज गरिराख्नुपर्छ । सामान्य एक्सरसाइजले पनि इम्यूनिटी बढाउन ठूलो भूमिका हुन्छ ।
आउन लाग्यो गर्मी, रोगबाट बच्न यस्ता गल्ती नगर्नुस्
बाँडफाँड भयो महिला लघुवित्तको आईपीओ, तपाईंको भागमा कति ?
प्रचण्ड–नेपाललाई जसपाको जवाफ - पार्टीको कित्ता प्रस्ट पारेर आउनुस्
भागरथी हत्या अनुसन्धान गर्ने दुई प्रहरीको भयो बढुवा